Nyefee Music si Mac formatted iPod ka Windows
> Resource> iPod> Nyefee Music si Mac formatted iPod ka Windows PC
Ị ka na-echeta ndị dị ukwuu "Hi m, m a Mac na m a PC" mkpọsa ngwá ahịa? Ma ọ bụ ndị a ma ama Steve Job Stanford malitere okwu n'ihota otú Windows dị nnọọ depụtaghachiri ihe niile Mac mere? Ọfọn, otu ihe anyị maara maka ụfọdụ bụ na Mac na PC bụ asọmpi na adịghị na-n'ụzọ dị nnọọ mma. Ma na nke a na-akpata nsogbu dị oké njọ ka anyị ahịa nke Mac ma ọ bụ PC kọmputa na iPods. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na gị iPod na-Mac formatted, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta gị iPod on a PC na-enweghị reformat gị iPod mbụ. Nsogbu a mere ka nnukwu ihe isi ike n'ihi na ọrụ ndị Switched si Mac ka PC kọmputa, ma na-achọ nyefee niile music na songs si a Mac formatted iPod ka PC.
Nke a bụ n'ihi omenala iPod ụdị n'ezie jikọọ kọmputa gị dị ka ma ọ bụrụ na ha bụ ndị mpụga nchekwa ngwaọrụ dị ka a ike mbanye ma ọ bụ USB ebe nchekwa igodo. N'ihi ya, ndị iPod eji a faịlụ usoro na-formatted maka usu sistemụ arụmọrụ kọmputa. Ya mere, mgbe mmadụ na-agbalị nyefee music si a Mac formatted iPod ka iTunes on a PC, na Mac formatted iPod na-adịghị ghọtara site PC n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla data na gị iPod dị mma reformat maka PC, ma ọ bụrụ na ị bụ dị ka m, na-enwe tọn music na songs agbali a Mac formatted iPod nyefe iji PC, mgbe ahụ, ị ​​na-esi nke chi na a ọzọ usoro ihe omume.
Ya mere, olee otú otu nyefe music si a Mac formatted iPod ka PC? M ebe a ka nwere ike ikwu ihe kasị mma nke atọ ngwaahịa mgbe ọ na-abịa na-ebufe music si Mac formatted iPod ka PC, Wondershare TunesGo usoro.
Download ikpe mbipute nke Wondershare TunesGo inwe a na-agbalị!
M n'onwe ọtụtụ puku music na songs na m Mac formatted iPod, na ọ bụ ezie na ọ bụ aka doable nyefee m niile songs na m Mac formatted iPod ka PC, ma m na-eme adịghị fancy na-ewe oge usoro nke ime otú ahụ. Nke a bụ ebe Wondershare TunesGo omume na-abịa. Ke m ikpe na TunesGo, ihe niile m na-eme bụ jikọọ m Mac formatted iPod m PC, mgbe ahụ, na click nke a ole na ole buttons, m ugbu a nwere ike ịnweta niile m songs on iTunes on m PC, na usoro naanị were nkeji ole na ole na kasị.
Dị ka a top EBIONITISM 3rd Party omume na-enye ohere music na songs nakwa dị ka ndị ọzọ faịlụ na-enyefere a Mac formatted iPod ka iTunes on PC, TunesGo bụ enweghị ntụpọ na-ọrụ ahụ. O sina dị, mgbe tụnyere ndị ọzọ yiri ngwaahịa na ahịa, Wondershare TunesGo omume awade ọrụ ndị kasị na kacha ụzọ nyefee music na songs si a Mac formatted iPod ka PC. Na mma niile, TunesGo nwere ike inyere ọrụ ndị ọzọ na-enyefe dị ka iPhone ka iPhone na management nke foto na ndị ọzọ na mgbasa ozi faịlụ.
Ntak download Wondershare TunesGo na-agbalị ugbu a!